HomeWararka MaantaDegdeg: Barcelona Oo Eriday Masuul Wax Ka Sheegay Lionel Messi
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa shaqada ka eriday masuul ka tirsan kooxda oo wax ka sheegay xiddiga reer Argeine ee Lionel Messi.
Pere Gratacos oo ahaa agaasimaha kooxda ayaa maanta waxa uu warbaahinta ku sheegay hadal aanu jeclaysanin Messi oo ahaa in aanu noqdeen xiddig haddii aanu garab taagnaan lahayn Andres Iniesta oo intii uu Barcelona joogayba ay iska garab ciyaarayeen.
Pere Gratacos oo warbaahinta la hadlay maanta duhurkii markii ay ka soo baxeen xafladdii isku aadka tartanka Copa del Rey oo la sameeyey wakhtigii qadada ee wakhtiga Bariga Afrika, ayaa waxa uu yidhi: “Haddii aanay ka garab ciyaari lahayn Andres Iniesta, Neymar, Peque iyo kuwo kale, Leo Messi muu noqdeen ciyaartoy sidan u wanaagsan.”
Hadalkaas oo warbaahintu si aad ah u qaadaa dhigtay ayaa waxa go’aan adag kaga jawaabay maamulka sare ee Barcelona oo war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay inay shaqada kaga eryeen agaasime Gratacos.
War-saxaafadeedka waxa kale oo lagu sheegay in booska Gratacos ee agaasimaha kooxda uu si ku-meelgaadh ah u buuxin doono Albert Soler oo ah agaasimaha ciyaaraha oo labada boosba isku hayn doona.
Go’aankan Barcelona warbaahinta u gudbisay waxa kale oo lagu xusay in Gratacos uu kooxda ka dhex muuqan doono marka la soo bandhigayo mashruuca Masia 360.
Gratacos oo mar ahaa tababaraha kooxda heerka labaad ee Barcelona sannadihii u dhexeeyey 2003-2005 iyo ciyaartoy kooxda soo marayba ayaa waxa uu xilkiisa ku seegay faallada uu ka bixiyey Messi.
Mourinho Oo Walaac Ka Muujiyey Lacagta Badan Ee Manchester City Ay Suuqa Gelinayso
Bournemouth 0-4 Liverpool – Goal and Highlights